सलमान खानकी यी नायिका बिबाह नगरी आमा बनिन्, ३ बर्ष पछि खुलासा गरिन यस्तो रहस्य !
बलिउड-देव डी, साहेब बीबी और ग्याङ्गस्टर, दबंगजस्ता फिल्ममा आफ्नो बोल्ड अन्दाजबाट सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल माही गिल आजकाल चर्चामा छिन् । नायिकाले हालै आफ्नो नीजि जीवनबारे खुलेर कुराकानी गरेकी छिन् । यतिबेला उनले आफ्नो एक छोरी भएको र यसमा आफूलाई गर्व भएको बताइन् । नायिकाले आफू विवाहित नभएको तर विवाह गर्न चाहेको बताइन् । हालै भारतीय मिडिया नवभारत टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले यो वर्षको अगस्टमा आफ्नी छोरी तीन वर्ष पूरा हुने बताएकी छिन् । यो कुरा किन लुकाएर राखेको भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘मलाई यसबारे कसैले पनि सोधेनन्, त्यसैले मैले पनि कहिले बताइनँ ।
विवाह नगरी बच्चा जन्माउनुलाई साधारण रुपमा लिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ कि सबैको आ–आफ्नै जीवन हुन्छ र हरेकको आफ्नै सिद्धान्त पनि छ । विवाह निकै सुन्दर छ तर विवाह गर्नु तपाईंको नीजि रोजाई हुनुपर्छ ।’ कामको कुरा गर्ने हो भने उनको फिल्म फ्यामिली अफ ठाकुरगञ्ज चाँडै नै रिलिज हुने तयारीमा छ । नायिका आजकाल यो फिल्मको प्रोमोशनमा निकै व्यस्त छिन् । यसबाहेक माही दबंग थ्रीमा पनि देखिनेछिन् । यो फिल्ममा उनीसँग अरबाज खान, सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हाको मुख्य भूमिका हुनेछ । यो समाचार रातिपाटीमा लेखिएको छ ।
“हो म लोभी भएँ”: सुपुष्पा भट्ट
चलचित्र ‘रणवीर’बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी नायिका सुपुष्पा भट्ट अहिले दोश्रो चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’मा काम गरिरहेकी छिन् । यो चलचित्रमा छोटो तर विशेष भूमिका रहेको सुपुष्पा बताउँछिन् । सोलो नायिकाको रुपमा आएका केही अफर टुक्राएर सुपुष्पा सानो भूमिकामा किन चित्त वुझाउँदैछिन्, यी र अन्य विभिन्न बिषयमा रहेर उनीसँगको छोटो कुराकानी :
१. सोलो नायिकाको अफर आउँदा केही फिल्म छाड्नुभयो, तर ‘छ माया छपक्कै’मा विशेष भूमिका पाउँदा नै किन गर्नुभयो ?
एकदमै सिधा भाषामा भन्नुपर्दा, मैले ब्यानर नै हेरेको हुँ । भूमिका सानो भएपनि एकदमै प्रभाव बनाउने खालको नै छ । मलाई अहिले हतार पनि छैन । म विस्तारै चलचित्र क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेकी छु ।
२. तपाइलाई भोजपुरीबाट बढी अफर किन आउँछ ?
त्यस्तो धेरै त होइन, ठिकै अफर आइरहेको छ । मलाई मेरो अनुहार उतातिरकोसँग मिल्छ भन्नुहुन्छ । ‘रणवीर’मा पनि त्यस्तै भूमिका भएर होला ।
३. तपाइलाई दर्शकले यति माया गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो ?
मैले त यस्तो सोचेको पनि थिइनँ । तर, दर्शकको मायाले उत्साहित छु ।
४. ‘छ माया छपक्कै’को टिमसँग काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
एकदमै रमाइलो भयो । यति रमाइलो टिम, हाँसेर मात्र काम गर्यौ । यसको सदस्य हुन पाउँदा निकै नै खुशी लागेको छ ।
५. भनेपछि तपाइले ब्यानर मात्र हेर्नुभयो, भूमिका हेर्नुभएन हैन ?
त्यस्तो भन्न पनि मिल्दैन । मैले मेरो भूमिका पनि हेरेँ । नहेरी त कसरी गर्छु र ? तर मुख्य त ब्यानर नै हेरेको हुँ ।
६. ‘रणवीर’ असफल हुँदा दिमागमा के कुरा खेलेको थियो ?
म त जहिले पनि सकारात्मक नै कुरा सोच्छु । आफूले मिहिनेत गर्यो भने राम्रो कदम चाल्यो भने सोचेको स्थानमा पुगिन्छ भन्ने नै लाग्छ । तर, ‘रणवीर’ नचल्दा मेरो करिअर के होला भन्ने त दिमागमा आएको थियो । तर, म सकारात्मक नै सोच राख्ने व्यक्ति हुँ ।
७. चलचित्र असफल भएपनि, ‘रणवीर’बाट दर्शकले के कुरा मन पराउनुभयो भन्ने लाग्छ ?
म आफ्नो अभिनय बबाल नै थियो त भन्दिनँ । दर्शकले माया दिनुभयो । तर, खै म कसरी भनुँ कि उहाँहरुले के मन पराउनुभयो ।
८. तपाई चुजी र घमण्डी हुनुभयो भन्छन्, हो र ?
त्यस्तो केही पनि होइनँ । रमित ढुंगानाजीको चलचित्रबाट अफर आउँदा मेरो परिक्षा परेकाले नगरेकी हुँ । म घमण्डी वा चुजी केही पन भएकी छैन । तर, एउटा कुरा के स्पष्ट हो भने पहिलो चलचित्र नचलेपछि म कथा छान्ने कुरामा ध्यान दिने भएकी छु । म डिमाण्डेड वा घमण्डी केही पनि भएकी छैन ।
९. भनेपछि ‘छ माया छपक्कै’को छनोटमा तपाई लोभी हुनुभएछ हैन ?
हो, यसमा त म लोभी नै भएकी हुँ । मैले ‘६ एकान ६’देखि नै उहाँहरुको चलचित्र हेर्दै आएकी छु । उहाँहरुको चलचित्र धेरै ठूलो संख्याले हेर्नुहुन्छ । यसो गर्दा मलाई पनि नोटिस गर्नुहुन्छ । यसैले लोभी त हुनै पर्यो नी होइन र ?